umshini wokunyathelisa ukudla, ibhisikidi, iphrinta yekhekhe China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-Cake Inkinobho edlayo,Iphrinta ye-Frosting ye-Cake,Ikhekhe lephrinta elidliwayo elikhulu
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > Iphrinta ye-Cake > umshini wokunyathelisa ukudla, ibhisikidi, iphrinta yekhekhe
Siye sagxila ekucwaningweni nasekuthuthukiseni i-i- printer yekhekhe edayi edayisiwe iminyaka engaphezu kwengu-10.
Njengoba ubuchwepheshe obucacile obuphezulu, ikhwalithi enhle kakhulu kanye nenkonzo ephelele, i-SK168 uchungechunge lwama-flatbed
I-cake frosting printer ihlonishwa kabanzi ngabasebenzisi abavela emazweni angaphezu kwangu-80.
Amaphrinta ethu ane-Certification CE, iSSS Factory Certification.
Uzoba nephrinta engcono kunazo zonke, ngezinga eliphezulu, ukuzinza nokusebenza okuhle.
Iphrinta ye-cake inkjet iholela kumamodeli amasha amabhizinisi amasha, okungaba ukugqama okukhulu kakhulu kwezicelo eziningi ekhishini elisebenzayo, i-catering, i-confectionaries, i-café nama-bakeries. Ikhekhe eliphakathi kweprinta elidliwayo lenzelwe ukugqugquzela, ukujabulisa, imfundo, nokuveza ubuciko kokubili abancane nabakudala ekhaya, ekhaya labahlengikazi kanye nemfundo ye-3d yephrinta yekhekhe ezikoleni.
Iphrinta ye-Cake Inkinobho edlayo Iphrinta ye-Frosting ye-Cake Ikhekhe lephrinta elidliwayo elikhulu Iphrinta ye-Cake idla Iphrinta yekhofi edlayo Iphrinta ye-Chocolate edlayo Iphrinta ye-Printer edlayo Iphrinta yeNkathi edlayo